भत्किँदै सदरमुकामका ढल | Hamro Okhaldhunga
भत्किँदै सदरमुकामका ढल
प्रकाशित मिति: १७ माघ, २०७५
ओखलढुंगा । सदरमुकामको बजार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ढल भत्किन थालेका छन् । ढलका स्ल्याबमाथि सवारी चलाउँदा भत्किन थालेका हुन् । बजारभित्रको सडकको बीच भागमा ढल निर्माण गरिएको छ ।
हल्का सवारी मात्रै चल्न सक्ने बजारभित्रका सडकमा ट्याक्टर गुडाउने र निमार्ण सामग्री जथाभावी राख्दा ढलका स्ल्याब भत्किने ढलान उप्किन थालेको हो । बजारका केही बासिन्दाले शौचालय समेत ढलमै मिसाएकाले भत्किन थालेपछि बजार समेत दुर्घगन्धित हुन थालेको छ ।
नगरपालिकाले हरेक वर्ष ढल मर्मत गरे पनि भत्किन छाडेको छैन । क्षमताभन्दा बढी लोडका सवारी साधन गुडाउने र गुणस्तरीय निर्माण नहुँदा समस्या आएको हो । बजारभित्र निर्माण सामग्री समेत जथाभावी राख्ने र निर्माण गरिएका ढलका स्ल्याब नसुक्दै सवारी चलाउँदा एक वर्ष पनि टिक्न छाडेका छन् । सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नं. ११ र १२ मा पर्ने रामबजार, रमाइलोडाँडा र गणेशटोल क्षेत्रमा सडकका ढलानका साथै ढलका स्ल्याब भत्किएका छन् । घर अगाडी भएका संरचना संरक्षणमा स्थानीय चासो नदिँदा पनि चाँडो भत्किने गरेको हो ।
बजार क्षेत्रलाई सरसफाइयुक्त बनाउन सरसफाइ अभियान चलाइएपनि एक दुई हप्ता चलेर बन्द भएको छ । ढल भत्किएर दुर्गन्ध बढेपछि आफैंले भत्किएको स्थान मर्मत गरेको स्थानीय ओम दयालले बताए । ‘निर्माण काम लाग्दो थिएन, भत्किएर दुगन्धित हुन थालेपछि आफैले मर्मग गरेँ’ उनले भने ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाले वर्षेनी ढल मर्मत भने गर्दै आएको छ । निर्माण तथा मर्मत गुण्नस्तरीय नहुँदा एक वर्ष नवित्दै भत्किन थाल्छ । सात वर्ष पहिले सदरमुकाममा खुड्किला भएका खण्ड भत्काएर ढलसँगै सडक ढलान भएको थियो । अहिले अधिंकाश ढलान भत्किएर जीर्ण बनिसकेको छ ।
वडा नं. ११ को रमाइलोडाँडामा सडक दायाँबायाका सबै ढलका स्ल्याव भत्किइ सकेका छन् । सवारीको अत्याधिक चाप हुने यस क्षेत्रमा सिद्धिचरण राजमार्गको हर्कपुर ओखलढुंगाको र ओखलढुंगा सोलु सडकको केन्द्रमा पर्छ ।
ओखलढुंगा नेवि संघद्वारा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन, प्रहरीले ठोक्यो लाठी